पर्यटन व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन २ वर्ष लाग्न सक्छ - टानका अध्यक्ष सुवेदी - ParyatanBazar.com
पर्यटन व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन २ वर्ष लाग्न सक्छ – टानका अध्यक्ष सुवेदी
पर्यटन बजार८ बैशाख २०७७, सोमबार मा प्रकाशित
बैशाख ८,काठमाडौं ।हाल विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको छ । कोरोना बाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । कोरोना कै कारण नेपाल सरकारले एक महिना देखि देशैभर लक डाउन घोषणा गरेको छ । यो लक डाउन कहिले सम्म हुने हो ,अझै कति सङ्क्रमित फेला पर्ने हुन् केही टुंगो छैन । लक डाउन सँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । भ्रमण वर्ष लक्षित लगानी फसेको छ।प्रस्तुत छ भ्रमण वर्ष स्थगित , कोरोना र लक डाउन लक्षित ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदी सँग गरिएको कुराकानी !
1.लक डाउन को समय कसरी विताइरहनु भएको छ ?
लक डाउन भएको पनि करिब एक महिना भयो। यो फुर्सदको समयमा नयाँ नयाँ पुस्तक पढिरहेको छु, व्यवसायीहरु सँग पर्यटन व्यवशाय का बारेमा छल्फल गर्दैछु र अफिसका कार्यहरुलाई पनि घरमै बसेर गरिरहेको छु।
2.लक डाउन का सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के होला ?
कुनैपनि अवस्थाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हरु हुन्छन्। धेरै वर्ष पछि परिवार संग लामो समय बिताउन पाइएको छ । सँधै काम भनेर विहान देखि राति सम्मै दौडिरहनु पर्ने अवस्थामा यस लक डाउन ले परिवार सँगको आत्मीयता लाई अझै गाढा बनाउन मद्दत गरेको छ । बाल बच्चा श्रीमतीलाई समय दिन पाएको छु, घरको काममा केही मद्दत गर्न पाउँदा खुशी पनि लागेको छ ।लक डाउन ले हामी सबैलाई एक हुने मौका त दिएको छ नै साथ साथै यसले तनाव पनि दिएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ , विद्यार्थीहरूको पढाइ डामाडोल बनेको छ । दैनिक काम नहुँदा पैसाको अभाव सिर्जना हुने त छदै छ , रोग लाग्ने चिन्ताले समेत सबैलाई सताउने गरेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा रोग बाट बच्न घरमै बसेर लक डाउन को पालना गर्नुपर्ने छ र यस समयमा खाली खाने सुत्ने मात्र नगरेर आफूलाई विभिन्न माध्यम बाट व्यस्त बनाउनुपर्छ।
3.लकडाउन पछाडिको परिस्थिति पर्यटनको लागि कत्तिको भयावह हुन्छ ? अथवा पहिलेको अवस्था मा फर्किन कति समय पर्खनु पर्छ ?
लक डाउन पछिको पर्यटन व्यवशाय को अवस्था एकदमै नाजुक बन्ने छ । पहिलाको अवस्थामा आउन अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ ।यो वर्ष भनेको जसोतसो व्यवशाय सञ्चालन गर्ने मात्र हो , कोरोना सकिएता पनि पर्यटकले घुमफिरका योजना बनाउन समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । नेपाल पर्यटन हिसावले महत्वपूर्ण भएपनि नेपालमा पर्यटकीय गतिविधी फष्टाउन बिदेशीहरुको बजेट बलियो हुनुपर्छ । उनीहरुले सरकारको निर्देशनलाई पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो नागरिकलाई भ्रमणमा जानु उपयुक्त छ कि छैन भनेर सुझाएको हुन्छ ।
त्यसैले २०२१ सालमा व्यवशाय पुनर्जीवित बनेपनि सामान्य अवस्थामा फर्किन २०२२ सम्म नै पर्खिनुपर्ने मेरो अनुमान छ ।
4. कोरोना भाइरस का कारण भ्रमण वर्ष स्थगित भयो, महिनौ लक डाउन भयो जसका कारण पर्यटन व्यवसायी धराशयी बनेका छन्, धेरैको लगानी फसेको छ, ती व्यवसायिहरुको कदम के होला ?
भ्रमण वर्षलाई केन्द्रित बनेर व्यवसायिहरुले ठूलो लगानी गरेका थिए जुन लगानी अहिलेको समयमा फसे बराबर नै छ । भ्रमण वर्ष स्थगित , कोरोना कहर र लक डाउन का कारण पर्यटकहरुको आगमन बन्द भएको छ र कमाईको बाटो बन्द भएको अवस्थामा व्यवसायीहरु निराश भएका छन् । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा(ट्राभल एजेन्सी,होटल, रिसोर्ट , ऐयर लाईन्स, ट्रान्सपोर्ट, रेस्टुरेन्ट, शप) झन् कति धेरै क्षति भएको होला , त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । होटल र एयरलाईन्स क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ । किन भने हेलिकोप्टर र एयरलाईन्सको बीमा नै धेरै हुने गर्छ ।
यो समयमा धैर्य गर्नु नै पर्छ , आतिएर पनि भएको छैन। हामीलाई आशा छ नेपाल सरकारले मारमा परेका व्यवसायिहरुको निमित्त आवश्यक सेवा सुविधा ल्याउने छ ।
5.सरकारले निरुत्साहित बनेका पर्यटन ब्यबसायी लाई उत्साहित बनाउन के – कस्ता योजना बनाउनु पर्ला ?
यस समयमा धेरै व्यवसायीहरु धराशयी बनेका छन् ।ठूलो लगानी तर कमाई माइनस मा गएका व्यवसायी लाई सरकारले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनै पर्छ। जसमा बैंक ऋणमा सहजता ,ब्याजदरमा कटौती , बिना धितो कर्जा व्यवस्था, आगामी वर्षको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विविध सामग्री उपलब्ध गराएर सरकारले व्यवसायी हरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।यो अवस्थामा सरकारले साथ दिन सकेन भने सहयोग गरेन भने पर्यटन क्षेत्र नै तहस नहस नहोला भन्न सकिन्न ।